January 2020 – Gulled Salah
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo safar shaqo ku maraya gobolada Puntland.
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo safar shaqo ku maraya gobolada Puntland. Read More »
Gudoomiyaha iyo xubanaha Guddiga oo la shiray xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Puntland.
Guddiga KMG ee doorashooyinka Puntland ayaa xaruntiisa dhexe wuxuu kula shiray xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Puntland oo matalaya wasaaradaha ay shaqada dhow kawada dhaxayso TPEC. Kulanka oo noqonaya mid bille ah waxaa maanta looga wada hadlay diyaarinta xeerka codbixiyaha, dhamaystirka astaynta xuduudaha degmooyinka iyo dardargelinta wacyigelinta dadwaynaha. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Gudoomiyaha iyo Guddiga KMG ee doorashooyinka Puntland oo la sharay qaybaha bulshada rayidka.
Guddiga KMG ee doorashooyinka Puntland ayaa xaruntiisa dhexe wuxuu kula shiray qaybaha bulshada rayidka iyo xarumaha aqoonta sida laamaha cilmibaarista, jaamacadaha, ururada haweenka, dhallinyarada iyo warbaahihta.Kulankan ayaa ahaa isxog-wareysi iyo in Guddiga iyo Bulshada Rayidka ah bishiiba mar ay shir noocaan oo kale ah isugu yimaadaan. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Guddoomiyaha iyo qaar kamida xubnaha Guddiga oo kulan la qaatay madaxa UNSOM xafiiskeeda Puntland.
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa manta kulan kula qaatay xarunta dhexe ee Guddiga madaxa UNSOM xafiiskeeda Puntland Mr. Guy Griffin.Kulanka waxaa looga wada hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa Horumarinta Dimoqraadiyada Puntland iyo kaalinta Qaramada Midoobay ay ka qaadan lahayd. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Gudoomiyaha iyo qaar ka mid ah xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay madax ka socda Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha ee PL.
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa manta kulan kula qaatay xarunta dhexe ee Guddiga madax ka socda Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha ee Puntland.Kulanku wuxuu ku saabsanaa sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen dhowrista xuquuqda aadanaha gaar ahaan sidii ay dadka reer Puntland loo gaarsiin lahaa wacyigelin ballaaran oo ku saabsan hannaanka xisbiyada badan iyo sidii muwaadin …
Gudoomiyaha iyo qaar ka mid ah xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay madax ka socda Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha ee PL. Read More »
Gudoomiyaha oo xalay ka qaybgalay dood cilmiyeed ku saabsan qabsoomidda doorashooyin qof iyo cod ah.
Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC ayaa xalay ka qaybgalay dood cilmiyeed ku saabsan qabsoomidda doorashooyin qof iyo cod ah oo ka dhaca dowladda hoose ee Puntland. Kulankan waxaa soo qaban qaabiyay daladda ururada aan dowliga ahayn ee PUNSAA, waxaana ka qaybgalay bulshada qaybaheeda kala duwan. Guddiga ayaa ka jawaabay su’aalaha ay qabeen bulshada ee ku …
Gudoomiyaha oo xalay ka qaybgalay dood cilmiyeed ku saabsan qabsoomidda doorashooyin qof iyo cod ah. Read More »
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland oo saaka ubilaamay tababar.
Guddiga KMG doorashoonynka PL Waxaa saaka u bilaamay tababar ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo ay bixinayaan khubaro Soomaali iyo ajaanib ah soconna doona muddo asbuuc ah. Tababarka waxaa la siinayaa Xubnaha Guddiga Doorashooyinka iyo Shaqaalaha TPEC. Tababarkaani wuxuu qayb ka yahay kobcinta aqoonta iyo xirfadda Guddiga iyo Hawlwadeenada kala duwan. Linkiga riix saad udaawatid tababarkan. …
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland oo saaka ubilaamay tababar. Read More »